China China- CQC Ọrụ na Ule | MCM
Over Asambodo Isi
Standkpụrụ na Asambodo Akwụkwọ
Standardkpụrụ ule: GB31241-2014: Mkpụrụ ụrọ Lithium ion na batrị ejiri na akụrụngwa eletrọnik ― Ngwa nchekwa
Akwụkwọ asambodo: CQC11-464112-2015: Batrị nke Abụọ na Batrị Pack Asambodo Nchekwa Iwu maka Ngwaọrụ Electronic Portable
Ndabere na Datebọchị mmejuputa
1. E bipụtara GB31241-2014 na Disemba 5Nke, 2014;
2. GB31241-2014 bụ mandatorily emejuputara na August 1abụrụ, 2015.;
3. Na October 15th, 2015, Asambodo na nzere ntozu Administration nyere a mkpebi teknụzụ na ndị ọzọ ule ọkọlọtọ GB31241 maka isi akụrụngwa "batrị" nke ọdịyo na video akụrụngwa, ozi technology ngwá na telecom ọnụ akụrụngwa. Mkpebi ahụ kwuru na batrị lithium ejiri rụọ ọrụ dị na ngwaahịa a ga-anwale nke ọma dịka nke GB31241-2014, ma ọ bụ nweta asambodo dị iche.
Mara: GB 31241-2014 bụ ụkpụrụ mmanye mba. Ngwaahịa batrị lithium niile a na-ere na China ga-agbaso ụkpụrụ GB31241. A ga-eji ọkọlọtọ a mee ihe na atụmatụ nyocha ọhụụ maka nyocha mba, nke mpaghara na nke mpaghara.
AtionObi nke Asambodo
GB31241-2014 Mkpụrụ ụrọ Lithium ion na batrị ejiri na akụrụngwa eletrọnik ― Ngwa nchekwa
Akwụkwọ asambodo bụkarị maka ngwaahịa eletrọniki ekwentị na-eme atụmatụ ịbụ ihe na-erughị 18kg ma ndị ọrụ na-ebukarị ya. Ndị isi ihe atụ bụ ndị a. Ngwaọrụ eletrọniki enwere ike depụta n'okpuru ebe a etinyeghị ngwaahịa niile, yabụ ngwaahịa ndị edepụtara edeghị oke nke ọkọlọtọ a.
Ngwa akparamagwa: Batrị Lithium-ion na batrị batrị ejiri na ngwa chọrọ iru ihe achọrọ.
Otu ngwa elektrọnik
Ihe atụ zuru ezu nke ụdị dị iche iche nke ngwaahịa eletrọniki
Obere ụlọ ọrụ ngwaahịa
akwukwo, pda, wdg.
Ngwa nkwukọrịta ekwentị ekwentị mkpanaaka, ekwentị na-enweghị eriri, ekweisi Bluetooth, Walkie-talkie, wdg.
Obere vidiyo na ngwaahịa vidiyo obere telivishọn, obere ọkpụkpọ, igwefoto, igwefoto vidiyo, wdg.
Ngwaahịa ndị ọzọ enwere ike ibugharị onye na-elegharị anya elektrọnik, eserese foto dijitalụ, njikwa egwuregwu, e-akwụkwọ, wdg.
Recognition Nghọta iru eru: MCM bụ ụlọ nyocha nkwekọrịta CQC kwadoro na ụlọ nyocha na ụlọ nyocha CESI kwadoro. Enwere ike itinye akwụkwọ nyocha ahụ enyere maka akwụkwọ CQC ma ọ bụ CESI;
● Nkwado teknụzụ: MCM nwere ihe nnwale GB31241 zuru oke ma kwadebere ya karịa ndị ọkachamara 10 ọkachamara iji duzie nyocha dị omimi banyere teknụzụ nnwale, asambodo, nyocha ụlọ ọrụ na usoro ndị ọzọ, nke nwere ike ịnye ọrụ asambodo GB 31241 zuru oke na nke ahaziri maka ụwa. ndị ahịa.
Nke gara aga: EU- OA
Osote: Brazil- ANATEL
Batrị Cqc Asambodo
Batrị Cqc Asambodo Ahịa
Batrị Cqc Asambodo Usoro
Ọrụ Asambodo Batrị Cqc
Batrị Cqc ebute Oge
Batrị Cqc kwuru
Batrị Cqc Report
Batrị Cqc Iwu
Batrị Cqc nkọwapụta
Batrị Cqc Nka na ụzụ Akwụkwọ
Batrị Cqc Nka na ụzụ chọrọ
Batrị Cqc Ule
Batrị Cqc Ule Ihe
Battery Cqc Ule Ule
Batrị Cqc Ule Nyocha
Battery Cqc Ule Ọrụ
Battery Cqc Ule Oge
Batrị Cqc Tr
Qlọ nyocha Ule Cqc
Laboratory Ule nke Cqc
Mmanụ Cell Cqc